Ny lalao ara-panatanjahantena 10 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
ny lalao ara-panatanjahantena nanjary sasany amin'ireo ankafizin'ny mpampiasa izy ireo. Sady amin'ny lalao lalao, solosaina ary finday. Miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana, nitombo be ny fifantenana ny lalao ara-panatanjahantena. Ho an'ny fitaovana Android ihany koa. Manana lalao maro sy tsara kokoa azo isafidianana isika.
Noho izany, nanapa-kevitra izahay fa hanatanteraka a fanangonana miaraka amin'ny fisafidianana ny lalao fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny Android. Safidy isafidianana karazana fanatanjahantena isan-karazany. Ho an'ireo mpampiasa manana fitaovana Android ananan'izy ireo hahita lalao araka ny itiavany azy ireo. Vonona ny hijery an'ity lisitra ity?
Rehefa mieritreritra lalao ara-panatanjahantena isika dia mazàna no matetika no baolina kitra. Saingy tsy io fanatanjahan-tena io ihany no hitantsika fa misy. Misy lalao hafa tena mahaliana mifototra amin'ny fanatanjahan-tena hafa. Avelanay miaraka aminao a fifantenana ny lalao fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny Android. Ankoatra izany, maro amin'ireo lalao ireo no maimaim-poana.
4 EA Fanatanjahantena UFC
6 Moto tena izy
9 Kintan'ny Golf
10 Antoko Snowboard: Fizahan-tany manerantany
Manomboka amin'ny iray amin'ireo mavesatra mavesatra amin'ity sehatra ity izahay. PES 2021 dia iray amin'ireo lalao fanta-daza amin'ity sehatra ity. Ho an'ny mpampiasa maro dia ity no lalao baolina kitra tsara indrindra ho an'ny finday avo lenta. Manana tombony maro. Manomboka amin'ny sary mahafinaritra, lalao mahafinaritra izay mifanaraka tsara amin'ny efijery finday, hatramin'ny ekipa sy mpilalao maro be. Afaka mamorona ny ekipanay tonga lafatra isika ary amin'izany hifaninana amin'ny vidiny tsara indrindra. Ho fanampin'izany, isika dia afaka mamorona fifaninanana hifaninanana amin'ireo namantsika. Ka mampiala voly tokoa amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Na dia ao anatiny aza isika dia mahita fividianana sy dokam-barotra. Tsy fividianana an-tery izy ireo, mba hahafahanao milalao nefa tsy mandoa vola.
Raha ny tena tianao dia ilay baskety, avy eo ity lalao ity no tadiavinao. Azonao atao ny misafidy ny ekipanao ao amin'ny ligin'ny basikety tsara indrindra eto an-tany, ny NBA. Na dia afaka misafidy ligy eropeana koa isika. Betsaka ny zavatra azo isafidianana.
ny tsara ny sary, mampiala voly ny lalao ary mandeha tsara ny fanaraha-maso.
NBA 2K Mobile - Basketball
Ahoana no fomba hafa, manohy ny lisitra amin'ny klasika baolina kitra iray hafa izahay nandresy nandritra ny taona maro izany. Ny saga PES dia iray amin'ny fahombiazana lehibe indrindra manerantany. Mikatsaka ny hitondra izany fahombiazana izany amin'ny fitaovana finday izy ireo miaraka amin'ny andiany 2018 an'ny lalao malaza. Safidio ny ekipanao ary miomàna handresy ny ligy tsara indrindra eran'izao tontolo izao miaraka aminy.
about sary tsara sy fanaraha-maso tsara dia mora ampiasaina amin'ny Android. Maimaimpoana ny fampidinana ny lalao, na dia misy fividianana ao anatin'ny lalao aza, indrindra mba hialana amin'ny doka manelingelina.
EA Fanatanjahantena UFC
Ho an'ny tia lalao ady tsara hitantsika io safidy io. Nandeha tany izahay haiady mifangaro, Ka tsy isalasalana fa hanana fifandraisana sy ady tsara amin'ity lalao ity isika. Nahavita namorona atmosfera tsara izy ireo, toy ny hoe teo amin'ny peratra ianao.
Sary mahafinaritra ary azontsika atao ny misafidy mpiady vitsivitsy. ny maimaim-poana ny fampidinana ny lalao amin'ny Google Play. Manana fividianana lalao ihany anefa izahay.
Nandeha tany a tennis kilasika. Iray amin'ireo lalao fanta-daza indrindra amin'ny console, azo alaina ho an'ny fitaovana Android ihany koa ankehitriny. Lalao izay azo antoka fa efa nilalao elaela ny ankamaroany. Tsy niova firy ny kinova finday. Mitazona ny votoatin'ny voalohany.
Manana ny Safidy hilalao irery na miaraka amin'ireo namantsika amin'ny alàlan'ny WiFi na Bluetooth. Maimaina ny misintona ny lalao, na dia misy doka aza. Azontsika esorina ireo doka ireo ho takalon'ny fandoavana sarany.
Moto tena izy
Mpankafy lalao maotera? Môtô indrindra. Ity lalao ity dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ity karazana ity izay ho hitantsika ao amin'ny Google Play. Ho tsapanao fa eo amin'ny faritra misy anao ianao. Ho fanampin'izany, manana ny safidintsika isika hatsarao ny moto rehefa mandroso amin'ny lalao.
Manana isika fomba lalao isan-karazany. Amin'ny iray amin'izy ireo dia afaka mivezivezy boribory maromaro isika. Toy ny lalao maro hafa ao amin'ilay lisitra, maimaim-poana ny fampidinana, saingy manana fividianana ao anatiny izahay hanesorana ireo doka.
Developer: Lalao Dreamplay
Lalao idealy izay mitondra antsika any amin'ny lalao golf. Toy ny golf tena izy, ny mikapoka tsara dia tsy zavatra mora indrindra eran'izao tontolo izao. Ho an'ny zavatra hikasika azy manaova fanazaran-tena betsaka mba hahazoana tifitra tsara. Ho fanampin'izay, manana rivotra ihany koa isika amin'ny lalao, izay hanasarotra antsika ho tonga tsara indrindra.
Manana ny safidy hilalao irery, na dia vitantsika aza mifaninana amin'ireo namantsika. Ka mety hahaliana ny mahita hoe iza no tsara indrindra. ny maimaim-poana ny fampidinana lalao, saingy misy doka azontsika esorina amin'ny fandoavana vola iray.
Pro Feel Golf - Fanatanjahantena ara-panatanjahantena
Developer: Fihetsika mifamadika
Antsika ity fifantenana amin'ny lalao fanatanjahan-tena tsara indrindra ho an'ny Android. Manantena izahay fa misy ny sasany tianao ary aza misalasala mampidina azy ireo.
Ny ligin'ny basikety tsara indrindra eto an-tany koa dia manana lalao maromaro. Io angamba no malaza indrindra amin'izy rehetra. Amin'ity tranga ity dia hisafidy ny ekipa tadiavintsika isika ary tsotra ny andraikitsika, mila mandresy ekipa hafa isika. Misy andiana hetsika maromaro ao, izay ahafahantsika mahazo valisoa maromaro, izay ahafahantsika mandroso haingana kokoa amin'izany. Ho fanampin'izany, ny lalao dia mamela antsika manampy mpilalao amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana rehetra. Ka dia tazonina ho vaovao hatrany amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Ao anatiny no ahitantsika ny fividianana sy ny doka. Saingy afaka milalao isika nefa tsy mandoa vola na inona na inona.
Golf dia tsy dia malaza amin'ny fanatanjahantena toy ny taloha, na dia maro aza no miahiahy fa fanatanjahantena io. Ao amin'ny Play Store dia ahitantsika andiana lalao golf ho an'ny Android. Na dia mety ho ny feno indrindra tamin'izy rehetra aza ity lohateny ity. Lalao izay nahazo aingam-panahy avy amin'ny tena fifaninanana sy kianja tena izy. Ity dia zavatra azo jerena amin'ny sary, mitandrina tsara, izay manampy amin'ny fidirana amin'ny lalao amin'ny fotoana rehetra. Ankoatr'izay, miovaova ny fahasarotana. Hatramin'ny totalin'ny singa 70 nampidirina izay mitaona ny lalao, toy ny rivotra, ny hamandoana na ny mari-pana. Lalao mahaliana ho an'ireo tia golf.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Toy ny tranga teo aloha, misy ny fividianana sy ny dokam-barotra ao anatiny. Fa afaka milalao ianao nefa tsy mila mandoa vola amin'ny zavatra iray. Izy ireo dia fividianana tsy voatery.
Antoko Snowboard: Fizahan-tany manerantany
Amin'ny tapaky ny ririnina dia tsy afaka tsy hahita lalao momba ny iray amin'ireo fanatanjahan-tena amin'ny lanezy ianao. Snowboarding dia malaza be, indrindra amin'ny vahoaka tanora. Misy lalao sasany momba an'ity fanatanjahantena ity ao amin'ny Play Store. Fa ny tena feno amin'ity lafiny ity dia ity lalao resahantsika ankehitriny ity. Manana fomba lalao sy fifaninanana maromaro isika ao. Ny tanjontsika dia ny handresy ny fihodinana tsirairay. Ho an'ity dia tsy maintsy ataontsika esory ny paikadinay tsara indrindra, misy tetika tsy manam-paharoa 50. Miaraka amin'izy ireo dia makà iray amin'ireo zava-bita 150 ao.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity lalao ity amin'ny Android. Averinay indray fa misy fividianana sy dokam-barotra ao anatiny. Saingy tsy mila mandoa na inona na inona ianao, satria tsy voatery.
Developer: Maple Media - Lalao Snowboard, Skateboard & Racing Games
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao ara-panatanjahantena 10 tsara indrindra ho an'ny Android